Umshini wokufaka i-ayisikhilimu, umshini wokuqandisa u-ayisikhilimu, ukuhlanganiswa kwezithelo - i-Runchen
Umholi womhlaba wonke ku-technolooy yomkhiqizo
Ngazise imibono yakho, siyenza igcwaliseke ngokuzenzakalela.
umugqa wokukhipha nokusika
Umkhiqizo oxhunywe ngentambo / umkhiqizo we-strip / ice cream Isigaxa / inkomishi / ucezu block
Gcwalisa u-ayisikhilimu, i-sorbet, imikhiqizo yeqhwa lamanzi kwizigaxa, izinkomishi neziqukathi eziningi ezinokuma okuhlukahlukene, ukwakheka nosayizi.
umhubhe ophindwe kabili
Runjin © Krunt ™ -N1200 Mina ...
Runjin © Krunt ™ -2000 uFr ...
I-Runjin © Krunt ™ -4000 F ...
URunjin ubene seri ...
E-China, amadolobha amaningi ngokwengeziwe aseqalile ukubuyela empilweni ejwayelekile, futhi abuyele emsebenzini wasehhovisi njengenjwayelo. Ukufakwa kwesayithi nekhomishini ngeke kuthinteke. Ngephrojekthi eqhubekayo yaphesheya kwezilwandle, sizo ...
Ukubonga okuvela ...
Sisebenzisane ne-Unilever global iminyaka eminingi. Kulezi zinyanga sithole imibono emihle evela kumakhasimende ethu. Kusishukumisela impela ukuba senze kangcono .Ithimba lethu lonke laseRunchen lizoqhubeka nokwenza imizamo yethu yokwenza ucwaningo ...
Siyaqonda ukuthi inqubo efanele yokukhiqiza nokwakhiwa kwesakhiwo kanye nokwakhiwa kwamandla okuhlinzeka ngezinsizakalo okonga kuqinisekisa ukusebenza kahle okuphezulu ...
Isisekelo sezinsizakalo ezigxile kumakhasimende kanye nezinzuzo zobuchwepheshe, uRunchen uzibophezele kwimishini yekhwalithi kanye nensizakalo enhle ...
Izinsizakalo ezisebenza kahle kusidingo sakho. Siqinisekisa ukuthi imishini yakho isebenza ngesimo esifanele, ngaphezu kwalokho, siyakwazi ukuxhasa ...